Profaịlụ ụlọ ọrụ - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
• Mpaghara osisi dị ihe dị ka square mita 7,500 na ngụkọta ndị ọrụ karịrị 400.
• Ike imepụta kwa ọnwa ruru puku square iri.
PHILIFAST bụ onye nrụpụta PCB ọkachamara na onye na-eweta nzukọ PCB, Ngwaahịa anyị gụnyere PCB nkịtị, nwere ihu abụọ na ọtụtụ, kpuchie PCB siri ike, PCB ọla kọpa dị arọ, PCB-metal, PCB ngwakọ, HDI, na ndị ọzọ bọọdụ dị elu.
Anyị na-na-na-eme ka elu-edu electronic n'ichepụta na exporting n'elu 10 afọ. Anyị nwere bọọdụ sekit PCB nke anyị na ụlọ ọrụ mgbakọ SMT nwere eriri mmepụta ọgbakọ zuru oke, gụnyere ngwa nnwale ọkachamara dị iche iche, dị ka AOI na X-ray, ndị otu injinịa nwere ahụmịhe na-enye ndụmọdụ mgbe niile ma dozie nsogbu ọ bụla na mmepụta, anyị na-akwado site na prototyping. maka imepụta oke yana mmemme fianl firmware, nnwale ọrụ iji hụ na ịdị mma PCBA.